Malunga nathi -QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Umenzi kobungcali iimagnethi kunye esisigxina iimagnethi Generator (PMGs yeinjini yomoya)
QIANGSHENG iimagnethi CO., LTD (QM)lishishini lobuchwephesha obuphambili obuvelisa ngokukhethekileyo kunye neemakethi (i-NdFeB edityanisiweyo kunye ne-bonded, Alnico, iSmCo kunye nemagnethi), i-Permanent Magnet Generator (PMG) kunye nenkqubo yeinjini yomoya. Sineearhente eMelika, e-Australia, e-Itali, e-Uruguay, eNepal nakwamanye amazwe.
Ngobuchule bethu bobuchwephesha, uluhlu lwethu oluninzi lwezixhobo zemagnethi esisigxina, kunye nokuchaneka kwecandelo lethu kunye namandla endibano, sikunika isisombululo esipheleleyo semagnethi. Ukuba ngaphezulu kwe iminyaka 25 Amava okubonelela ngeemveliso ezintsha kunye nezisombululo kuyilo kwihlabathi liphela, sizibophelele ekunikezeleni elona nqanaba liphezulu lenkonzo yabathengi, uncedo lobuchwephesha kunye nexabiso kuwe.
Iqela lethu elihamba phambili kwezobunjineli lisentliziyweni yesakhono sethu sokubonelela ngezisombululo zemagnethi ezihlangabezana kwaye zigqithise kulindelo lwakho. Ngamnye weenjineli zethu ezinamava kakhulu yingcali kuyilo nakwimveliso ye-elektromagnet kunye nezixhobo ezisisigxina zomazibuthe, iindibano kunye neenkqubo. Banobuchule kakhulu ekukhetheni nasekukhupheni izixhobo zemagnethi kunye nezinto. Bakuqhele ngokupheleleyo ukusebenza nabathengi kuwo onke amabakala oyilo lwabo, kunye nokukunceda ukhethe izisombululo ezihambelana kakhulu neemfuno zakho, kunye nokusebenza kweendleko engqondweni.
Vumela ubuchule bethu bobuchwephesha kunye namava aphathe zonke iimfuno zakho. Sithumela ngaphandle uluhlu olubanzi lobungakanani obuvela kwimizi-mveliso yethu, Sineqela leenjineli eziboleka izakhono zazo ezizodwa kunye noyilo lobuchwephesha ukuhlangabezana nokubalula kwakho. Iisampulu ziyafumaneka ngexabiso, kwaye zihlala ziphathwa kwaye zihanjiswa ngokukhawuleza. Ixesha lokusebenzisa izixhobo ngokwesiqhelo lithatha ixesha elingaphantsi kweeveki ezintathu kwisampulu yesayizi encinci. Sithumele iinkcukacha zakho namhlanje, kwaye siya kudibana ngokukhawuleza neemfuno zakho zoyilo kunye neemveliso ezinamaxabiso afikelelekayo.
Khuphela ngasekunene © 1996-2022 Qiangsheng Magnets Co, Ltd Onke amalungelo agciniwe